Ta’uu Mala! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooTa’uu Mala!
Qixxeessaa Lammii | Gurraandhala 09, 2018
Dhalli namaa hundeen isaa tokko ta’u, ADAMII FI HAWWAA ( irraa argamuu, biyyee irraa argamuu fi biyyatti deebi’anii galu amantaa fi seenaan hin ibsine hin jiru.. Tokko lama sadi ta’aa akkuma deemamuun firummaan dhihoo fi fagoo gara nyaaphummaa fi alagummaatti dagaagaa deemuun hidda latiinsa dhala namaa keessatti seenaa ifaan mul’ateedha. Jaalala, kabajaa, walii fi yaadni, wal dhabni, wal jibbi, hinaaffaa, waanyoo fi wkkf cufti hormaataan baay’atuu, qubsumaan adda faffagaachaa adeemuu, fedhii gara garaan bitamaa ykn hawatamaa adeemuu fa’a irraa amaloota dhala namaa keessatti dhalachaa fi dagaagaa dhufan akka ta’e beekamaadha. Lahii ykn afaan gara garaatti dhimma bahuun, aadaa fi amantaa gara garaa qabaachuu fi hordofuun mataan isaa waneen dhala namaa giddutti garaa garummaa har’a mul’atan mul’atoo
kana babal’isan keessaa isa tokkoodha.
Addunya tana irra ummattootni biiliyona heddutti laakkawamu kan argame guyyaa ykn halkan tokkoon wal horee akka hin taane beekkamaadha. Baroota dheeraa keessa wal horee dugda ardii bal’oo tana irra faca’ee qubate. Bifa adii, gurraacha, deemaa, daalacha, boora, magaala, arrawa, hamara, bulee, odolcha magariisa, cuqulisa, burree, saaqaa, muxaa, maaldoo, dammii kkf qabaachuun, uunkaa ykn hojja dheeraa, gabaabaa, bal’aa, dhiphaa, furdaa, qal’aa qabaachuun, sammuu beekaa, wallaalaa, hubataa, daafana qabaachuun, humna jabaa, laafaa, onnee goota dabeessa, amal dhara, fayyaalessa fi gaarii ykn hamaa ykn badaa kkf qabaachuun, saala dhiiraa fi dhalaa qabaachuu irraa lubbu qabeessi cufti garaa gara akka ta’e beekkamaadha. Fakkeenyaaf nama ta’uu irratti dhiiraa fi dubartummaa qofa irraa kan hafe waan gara biraa hundumaan dhalli namaa wal qixa ilaalchi jedhu sammuu namaa keessatti bal’inaan amanamee fudhatamas argatee jira.
Dhugaan jiru garuu akkas miti. Lafa tana irratti wanti uumame cufti wal qixa hin ta’an. Garaa garummaa hedduu qabu. Lubbu qabeeyyota, lubbu maleeyyota, lafa tana irratti argaman hundaan wal qixa jechuun rakkisaadha. Lafti mataan isii gaara, dhooqa, raasaa, qilee, goda, bishaan, didibboo, baddaa, gammoojii, badda daree, udumee, bosona, caccaba, sululaa fi uunkaalee gosa gara garaan uumamuu isii irraa garaa garummaa guddaa qabdi. Lafti lafuma malee garaa garummaa hin qabdu jechuu kanaaf hin danda amne. Hunduura waan hundaa waan taateef lafa akka fakkeenyaatti kaase malee waa’ee garaa garummaa uumamoota maraatokko tokkoon kaasee gadi fageenyaan ibsuu barbaadee osoo hin taane kaayyoon kiyya waan hunda keessa garaa garummaan akka jiru gabaabatti akka hubatamu fedheeti.
Dhalli namaa waan kana hunda guutuu guututti wal qixa ni beeka jechuun ammoo rakkisaadha. Kan beekaa wallaalee fi kan gonkuma hin beekne jiddutti garaa garummaa jiru irraa dacheen tun harki caalu rakkoo keessa jirti. Yaadaa fi ilaalchaan walii galuu fi walii galuu dhabiinsa dhala namaa giddutti nanannahu irraa addunyaan tun nagaya dhabdee qorii lolaan guuttamte akka taate hubachuun hin rakksu. Kan waa balleessu, tolchu waan hunda irra dhala namaati. Harki guddeessi wal balleessuu fi of balleessuu irratti murteeffatee kan dhalate fakkaata. Addunyaa bal’oo sammuun dhala namaa walitti butte hoxxee takka taasise tana keessatti har’allee garaa garummaan silaa jiraachuu hin malle itti fufee jiraachuun badiinsaa fi bahiinsaafis itti gaafatama guddaa kan qabu fi fudhatu dhala namaa qofa akka ta’e hubachuu nama hin dhibu.
Kan dhiibamuu fi dhiibu giddutti wal dhabbiin dhalattu furmaata argachuu kan dandeettu yoo qaamni lamaan waliif faallaa ta’an dhugaa irratti hundaa’uudhaan wal dhagahuu irratti walii galan qofa akka ta’e ifaadha. Dacheen qabeenya Rabbi uummate malee qabeenya eenyuutuu akka hin taane, uumamootni irratti Rabbiin uumaman cufti ergisa yeroo gabaabaa qofaaf kan irra jiraatan malee dhaabbatummaan akka qabeenay handhuuraa isaaniitti qabatanii irratti waaranii kan jiraatan akka hin taane beekkamaadha. Ardii ergisa irra jiraatan irratti kan wal fixaniniif ammoo faaydaa yeroof qofa akka ta’e silaa beekamee dhalli namaa tokko sababa hin malle kanaan galaafatamuu hin qabu ture. Aadaa fi amantaan ummata Oromoo sirna kana hordofa calaqqisas. Aadaa fi amantaan isaa kun isaaf kabajamuu dhabuun isaa ammoo waan bay’ee nama gaddisiisu. Aadaa jiruu fi jireenya hawaasummaa keessatti nu malee malee ana malee yeroon inni itti jedhee biyya isaa irraa ummattoota biraa humnaan itti roorrisee dhiibe seenaa keessatti hin jiru. Sirna gabraa fi gabroomsaa kan walitti fide dhala namaati malee sirnichi
ofiif of hin uumne. Sirna badaa kana abbama fidee fi abbama fudhatetu gamtaan balleessuu male. Oromiyaa humnaan itti duulee qawween kan qabatee qabeenya hadhuuraa isaa kan taasifate ilmaan Abashootaati. Dhalli Oromoos akka seenaan himaansa afaanii jedhutti lafti har’a Abashaan akka biyya isaaniitti himatan akka dhala Oromoon irra jiraatama turame himama. Biyya sana Oromoon bulchaa akka ture seenaa gara garaa irraa ni hubutama. Dhugaa ta’uu fi dhiisuu kan mirkaneessu garuu qormaata bal’aa irratti geggeessuu qofa. Ammatti garuu sana, kana jedhanii lafa kaahuun dhibaadha. Ta’uu mala jedhanii akkanumaan cal’isanii bira taruunis hin barbaachisu. Ta’uu malaan ta’uu fi ta’uu dhiisus mala waan ta’eef dhugaa jiru gara tokkotti baasuun ykn qulqulleessuun seenaa dhugaa galmeessuuf nama gargaara. Seenaan dhugaa kan wal shake shakkii keessaa baasa, kan wal dide walitti araarsa, kan walitti diinome walitti firoomsa.
Amaarri Oromiyaan biyya teenya jedhee himata. Oromoon garuu Gondar, Gojjam, Tigraay biyya teenya jedhee himachaa hin jiru. Oromiyaa qofaan biyya tiyya jedhee himata. Dhala namaa ta’uu irratti garuu sabootni lachuu wal dhabbii hin qaban. Dachiin tun tiyya! Tiyya jechuu irratti qofa kan isaan walii galtee hin qabne. Dachee irratti wal dhabuun dura namooma irratti wanti
isaan wal dhaban kan jiru garuu haala jiruu fi jireenyaa keessatti sadarkaadhaan wal irraa jala jiraachuudha. Garaa garummaan jiruu fi jireenya gidduu jiru garaa garummaa numummaa gidduu jirus akka waan jiruu tokkotti akka ilaalamu gochuu danda’ee jira. Amaarri shanyii namaa keessaa shanyii falatamaa, Oromoon shanyii namaa keessaa shanyii gadi aanaa fi tummfatamaa ykn balfamaa akka ta’etti akka fudhatame beekkamaadha. Garaa garummaan ulfaataan akka laayyotti waliif araaramuu hin dandeenye sabota kana lamaan gidduu yeroo dheeraaf jiraatee turuun mataan isaa gufuu hin buqqaane saboota lamaan giddutti xirebbee dabruun isaa ni jira. Kana bulchinsa gabroomsaa abbaa irree ilmaan Abashaan fidametu dhalche malee waan uumaadhaan argame miti. Dhalli namaa akka namaatti namuma. Ulfina qabaachuu irratti wal irraa jala hin jiru. Bulchiinsa ilmaan Tigree kan ganna 27 kana keessatti garuu ol aantummaan kan ilmaan Tigrootaa akka ta’e waan haalamu miti. Ajjeessuu fi jiraachisuu irratti murtii kennuuf kan mirga ol aanaa qabu dhalataa Tigree qofa. Du’uu fi jiraachuuf Tigree irraa hayyama qabaachuu barbaachisa. Kan Tigeen ajjeefamee fi kan Rabbiin ajjeefames awwaala argachuuf dirqitti Tigreen hayyamuu qabdi. Kan awwaalame boollaa baasuu fi kan du’e awwaaluu irrattis murtii dhumaa kennuuf kan mirga guutuu qabu Tigree qofa. Hammeenyi hiriyaa hin qabne ummattoota biyyattii keessatti addatti ummata Oromoo irratti waggaa 26 oliif ilmaan Tigreetiin raawwatamaa turamee fi ammas itti jiramu kun har’a lolaa hin dhaabbatne uumee jira. Lolaa Tigree dhabamsiisuuf biyyaa guutuu keessatti dhangal’e kana gara biraatti jallisuuf kittillayyootni Tigree bakka maraa magada dabaa qotaa akka jiranis beekkamaadha. Tattaaffii aduun itti dhiite kan ilmaan guddisaa Tigree itti jiran kana sangoomsuuf ummatni bal’aan biyyatti sirna Tigreen buluu jalaa of baasuuf qabsoo farra Tigree jalqabe daran finiinsee xumura itti godhuu qaba.
Amaarri Oromoo firoomfachuun, Oromoon Amaaraa fi saboota hafan biraas hedduu firoomfachuun bara itti mul’ate keessa jirra. Dhugatu keessa jiraa fi hin jiruu ammoo hojitu adda fooyuuf jiraata. Kan waliif rifatu cufti haa xiqqaatuu dhiigummaa wayii hin dhabu bir’aa jedhu qaba. Amaara keessaa warri Oromoof rifatan dhala Oromoo kan bara loloota bara dheeraan dura ummata lamaan kana giddutti ta’aa ture keessatti haala adda addaan biyya sana dhaqanii achitti hafanii wal horuudhaan Amaarummaan of beekan keessaa tarii ta’uu mala. Osoo hin jaalatin dhiigummaan isaan ummata Oromoo waliin qaban isaan dirqisiisee miidhama Oromoo irra gahu kana dura dhaabbachuuf kan dirqaman natti fakkaata. Oromoon miidhama ummata Amaaraa irra geeffamu irraa hammaatanii ummata Amaaraaf ananannatanii dubbatillee akkasuma ilmaan Amaaraa kan baroota dheeraaf ummata Oromoo keessatti horanii Oromaayaan kan dhigaan garuu ummata Amaaraa irraa ta’an ta’uu malu. Akkuma namoomaattuu miidhama namaatti namni gammadu hin jiru. Kan ilmaan Tigree ammoo baasa baasa caale. Nama akka isaanii irratti murtii du’aa hennaa dabarsanii du’a irratti raawwatan gammachuun isaan qaban daangaa hin qabu. Nama ajjeessuun isaan biratti kubbaa taphachuudha. Moohinsi isaanii ajjeechaan eeggama ykn tikfama. Ummattootni biyyattii guutuun amala Tigrootaa kana beekanii jiru. Bakka badii gochuu ofii hin dandeenye akka ummattootni badii wal irratti raawwatan gochuudhaan biyyattii keessatti beekkama ol aanaa gonfattee jirti. Ummata Oromoo fi Somaalee walitti ooftee wal ficcisiisuun kanaaf ragaa qabatamaa bara kanaati.
Ummattootni waan hedduun hidhata dacha dachaa waliin qabu har’a ibiddaa fi citaa walitti taasifamuun sababaan barbaachiseef tayta ofii turfachuuf akka ta’e itti dhaqabamee jira. Buchullootni isiin guddifaman garuu ijaa fi sammuu daba kana ittiin arganii fi onnee daba kana dura ittiin dhaabbatan waan hin qabneef umrii dheerina bulchiinsa Tigee kanaaf qooda ol aanaa gumaachuu irraa dhaabbachaa kan jiran hin fakkaatan. Badaa waliin baduu kan jedhamu waan akkanaa hojjachuu irraa dhalata. Qajeelfama Ekeraa Mallasiin awwaala keessaa bahu fudhachuudhaan ummattoota fixuun akka fixamiinsaaf of qopheessaa jiran waan hubatan hin fakkaatan. Akkuma fixuu danda’an fixamuu akka danda’an beekanii hin jiran. Ummatni Oromoo garuu ekeraa Mallasiin qajeelfamuu irraa eega lagatee bubbulee jira. Bulchiinsa Tigree lagachuu bira taree sabaa fi sab-lammoota biyyattii cufa akka isaan bulchiinsa Tigree lagatan dhiibbaa hammana hin jedhamne sadarkaa irra geessuu danda’u irra gahee jira. Ummatni Koonsoo, Sidaamaa, Hadiyaa, Affaar, Amaaraa fi kanneen biroos har’a bilisummaa ykn dhuma jechuu eegalanii jiru. Harki caalu gaaffiin Oromoo gaaffii keenya, gaaffii haqaati, deebii argachuu qaba, jechuudhaan dirree bahatti sodaa du’aa tokko malee Tigree dura dhaabbachaa jiru. Injifatnoo wal irratti qarqabamaa dhufe kun warraaqsa ummata Oromootiin lafatti kan kalame akka ta’e hubatamaadha. Kana irraa ka’uudhaan ummata Tigree keessaahis gaaffiin Oromoo gaaffii haqaatii deebii haqaa argachuu qaba sadarkaa jechuu itti danda’an irra gahamee jira. Oromoof quuqama qabaachuun kun akkuma olitti eeruu yaale dhiiga Oromoo qabaachuu irraa kan madde ta’uu mala. Sochiileen miiraan dhiibamanii baqaqanii ala bahan hunduu iciitii wayii of duubaa qabaatu. Oromoon bakka maraa dhiiga qabaachuu fi adda jiraachuu dhabuu akeeka. Kan sochii Oromoo dura dhaabbatu harki caalu qaama dhiigummaa Oromoo waliin hin qabne qofa jechuu baatamus qaamota waan gara garaa irratti hundaawuudhaan wal makaa ta’an irraa kan ijaaraman akka ta’an ifaadha.
Ummatni Oromoo warraaqsa wayyaanee of irraa qaarisuuf amma itti jiru kana keessatti ummattoota biyyattii gaaffii mirgaa Oromoof deebiin haqaa kennamuu qaba jedhanii warra dirre bahatti sodaa tokko malee wayaanee hudhanii qaban firoomfachuu irratti ummatni Oromoo ciminaan dalaguu qaba. Garaa garummaan gosa hundaa kan dhala namaa giddutti jiru kan asii olitti tarrisuuf yaale hundi akkuma jiranitti ta’anii diina irra fira qabaachuun barbaachisaa akka ta’e amananii fudhatanii Tigree barcuma cunqursaa kana irraa gombsuuf gamtaan duula itti bahuu feesisa. Kana dhugoomsuuf ammo mallii fi falli tokkichi jiru ummatni Oromoo ummattoota biyyattii cufatti abbaa ta’ee warraaqsa itti jiramu kana finiinsuudhaan milkii dachaan guduunfuu danda’uudaha. Wal jibbiinsii fi wal jaalalli dhiiga waliin qabaachuu fi qabaachuu dhabuu irraa akka madduu malu bir’aan jiraatullee hamma hin dhugoominitti fudhachuu fi maxxanfachuun rakkisaadha.
Dhiigaan tokko ta’uu irra wanti nama tokkoomsu, waliif nama dhimmisiisu, waliif nama dhukkubsu hin jiru. Garaa garummaan gara garaa kan guyyaa keessa nama giddutti dhalatan fala qabaachuu dhabuu hin qaban. Nagaan, fayyaa fi jaalalli nama gidduu jiraatnaan wanti nama dhibu tokkolleen hin jiru. Amaloota farra firummaa ta’an hordofuun wal hammeessuu hin barbaachisu. Waan sammuun akka dhuunfaatti qaban itti nama hin amanin gadatu faarseef faarsuun, gadatu abaareef abaaruun murtii haqaa fudhachuu miti. Murtii haqaa fudhachuun waan ofii itti amanan qofa irratti dhaabbii qajeelaa hin daddaaqne qabaachuu fi irratti cichuudha. Murtiin qulqulluun akkasii nama hin gaabbisiisu. Tolu ittiin boonta. Hammaatus ittiin of ajiifatta. Ta’I jedhamee ta’e, jedhi jedhamee jedhe, natti fakkaatee godhe, itti hin amanne turee haala jedhuun masakamuun kufaatitti nama geessa malee bu’aan irraa argamu hin jiru. Qilleensa gara garaa kan yero yeroon namoota hagoo Oromoo ofiin jedhaniin ummata Oromoo keessatti facaafaman jala Oromoota raafaman akka isaan dhaabbii mataa isaanii malee dhaabbii dhaabbii namoota biraa milkeessuuf harka tuman, lollaban, faarsanii fi sochiilee gara garaa akka bakka bu’ummaatti godhan gorsuu barbaadeeti.
Dhalli namaa kabajamaadha. Wal dhabuu fi walii galuun waan uumaan jiru. Amala ol aantummaa fi gadi aantummaas kan ofitti ykn walitti fides dhaluma namaati. Waan toluu fi hin tolle kan addaan beekesu dhaluma namaati. Waan ta’uu qabu, ta’uu hin qabne, gaarii fi hamaa, dhugaa fi dhara kum akka irra wayyu dhala namaa ta’ee kan hin beekne ni jira jechuun rakkisaadha. Wanti akka dhuunfaatti hawwamu cufti nama cufaan akka hawwamu beekuu barbaachisa. Dhalachuu hawwuun namni hawwii isaan dhalate addunyaa kana irra hin jiru. Du’uu sodaatuu ykn jibbuun namni du’a irraa of hambisee addunyaa tana irra jiru hin jiru. Dhalachuu irraa gammaduun fi du’a irraa ooluu dhabuu irraa yaaddawuun kan eegalamu eeguma dhalatanii guddatanii of beekan booda dhufu.
Ilmaan Tigree kan waggoota dheeraaf mootii moototaa ummattoota biyyattii irratti ta’an har’alee abdii hin kutanne. Balleessuu malee akka balleeffamuu danda’aman hin amanne. Ta’uu malaan akka ta’aa jiru hin galleef. QBO ABOn bara dheeraaf hooganamtee as geette har’a galaana warraaqsaatiin akka isaan liqimsite hin argine. Oromootni sirnoota bulchiinsaa abbootii isaanii keessatti haala gara garaan isaan keessa dhaqanii achitti hafanii Tigraahanii fi Amaaran hundi har’a dhiiga isaaniif quuqamanii ummata isaanii bira dirree bahanii dhaabbachaa akka jiran waan hubatan hin fakkaatan. Ummatni Oromoo garuu kana akka gaaritti beekee karaa isaaf aanjahe maraan dhiiga isaa simachaa jira. ABOn fagotti of irraa eegan amma bobaa isaanii jalaan itti dhalatee lubbuu keessaa baasuuf hudhee akka morma isii harkaa qabu hamma ammaatti waan of irratti argite hin fakkaatan. Kanaaf ammalee abjuun isaanitti mul’atu ABO dhabamsiisuu qofa. Dhaaba waggaa 27 keessatti dhabamsiisuu dadhaban waggaa meeqa dabalatanii dabamsiisuuf akka isaan itti bobba’uuf jiraatan isaan malee qaamni biraa
kan beeku hin jiru.
Sagantaa fi karoora moofaa yeroon irraa darbre haarahoomsuuf yaaluun isii of gowwoomsuu akka ta’e yoo isiin hubachuu dadhabdellee, ummattootni biyyattii garuu yeroo ammaa walabummaan Oromiyaa, Bilisummaan Oromoo injifatnoo ummattoota biyyattii walii galaaf wabii ol aanaa akka ta’e beekanii qaama qabsoo ABOn hoogganamtuu ta’anii jiru. Kanaaf dhiphummaa fi of tuulummaa ofii qabaniin ABO himaa turuun dhabama irraa isaan hambisaa hin jiru. ABOn abbaa ummattoota biyyattii tanaa qofa osoo hin taane abbaa ummattoota naannoo gaanfa Afrikaa kan walii galaa ta’uu isaa hojiidhaan lafa irratti mirkaneessaa jira. Akkasuma qabsoon bilisummaa ummata Oromoo qabsoo ummattoota Afrikaa guutuu akka ta’e atileetota ilmaan Oromoon hawaasa addunyaa walii galaaf mirkaneeffamee jira. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaamotni hirmaatan cufti fira ykn diina jechuun murtii dhumaa kennuu irra ta’uu mala jechuudhaan diina of irraa haphisuun fira heddummeeffachuun barbaachisaadha. Ta’uu malaan ta’uu fi ta’uu dhiisuu akka malu beekuun barbaachisaadha.
Qixxeessaa Lammii irraa.
Qixxeessaa Lammii | Amajjii 07, 2018 Fakkaachuu fi ta’uun tokko ta’uu hin danda’u. Garaa garummaa…
Wayyaanee; Murna Kan Jettuu fi Kan Hojjettu Tokko Ta’ee Hin Beekne!
Wayyaanee; Murna Kan Jettuu fi Kan Hojjettu Tokko Ta’ee Hin Beekne! Baarentuu Gadaa Irraa Dubbiftoota!…
Dhiisi Maaloo Si Itti Bariitee Jirti!